I-Xiaomi Mi MIX 3 5G: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
UXiaomi ngomnye wabalinganiswa abaphambili kule Cawa kwi-MWC 2019. Ukusukela oko uphawu ekugqibeleni lusishiyile nge-smartphone yalo yokuqala ene-5G. Njengoko ubusazi kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, Inguqulelo ekhethekileyo yeMi MIX 3. Le modeli kulindeleke ukuba ifike kumsitho e-Barcelona, ​​into esele yenzekile. IXiaomi Mi MIX 3 5G ngoku isemthethweni.
Njengoko unokulindela, kwenziwe utshintsho oluninzi kwisixhobo. Utshintsho lokuqala, okona kubalulekileyo, kukuba le Xiaomi Mi MIX 3 5G ifika ngeSpapdragon 855, eyona processor inamandla kwintengiso, ke inayo le nkxaso ye5G. Sikuxelela ngakumbi ngezantsi.
Ngokwendlela yoyilo, igcina iimpawu ezizizo sikwazile ukubona kwimodeli yoqobo. Ke ngoko sifumana ukugqitywa kweceramic, ukongeza kuyilo lwesilayidi, olutsala umdla omkhulu xa lwalusungulwa ukuwa kokugqibela. Nangona ngaphakathi silufumana olu tshintsho.
Olu lutshintsho olwenzileyo lwenzeka iXiaomi Mi MIX 3 5G yeyona smartphone yokuqala Yophawu lwaseTshayina ukuxhasa i-5G. Ukongeza kwenye yeyokuqala kwintengiso ukuba ibe semthethweni.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi MIX 3 5G
Ukucaciswa kweXiaomi Mi MIX 3 5G
Apha ngezantsi ungabona inkcazo epheleleyo yeli banga liphezulu lophawu lwesiTshayina. Njengoko besesitshilo, sifumana utshintsho oluncinci xa kuthelekiswa nemodeli yoqobo. Ngokulula kule meko sifumana iprosesa kunye nemodem ezenza ukuba kwenzeke Isixhobo sinokuhambelana kwe5G.
Ukucaciswa kobuchwephesha Xiaomi Mi MIX 3 5G
Umzekelo Mi MIX 3 5G
Isikrini I-intshi ye-AMOLED 6.39 ngesisombululo se-1080 x 2340 pixels kunye ne-19 5: 9
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 855 i-core-core
Ukugcinwa kwangaphakathi 64 / 128 / 256 GB
Ikhamera esemva I-12 + 12 MP eneeferches f / 1.8 kunye f / 2.4 kunye neFlash Flash
Ikhamera yangaphambili I-24 +2 MP ngokuvula f / 1.8
Conectividad I-5G ezimbini zeSIM Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac USB-Type C
Ezinye izinto Ngasemva isivamvo seminwe ye-NFC 3n 3D yokuvula ubuso
Ibhetri I-3.800 mAh ngokutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ixabiso 599 euro
Olunye lotshintsho esilufumana kwimodeli bubukho bezinye iindlela zokugcina. Esi sixhobo besele sineenguqulelo ezintathu ngokwe-RAM, ibingowokuqala wegama lesiTshayina ukufika nge-10 GB ye-RAM. Kule nguqulo ene5G sifumana kwakhona iinguqulelo ezintathu ze-RAM. Kwakhona ezintathu zokhetho ngokubhekisele kugcino, 64/128 okanye 256 GB umthamo. Ukuze umsebenzisi abenakho ukukhetha efanelekileyo kuye.
Ngaphandle koko sinokubona ukuba akukho lutshintsho lwenziweyo kule Xiaomi Mi MIX 3 5G. Isixhobo sigcina imilinganiselo yaso yoqobo. Inqaku elinye elinokuphoxa uninzi yinkqubo yokusebenza. Okoko isixhobo isasebenzisa i-Android 8.1 Oreo. Bekulindelwe ukuba iza kufika kunye ne-Android Pie, kodwa okwangoku kuya kufuneka ulinde de ufumane uhlaziyo ngokusemthethweni. Asazi ukuba oku kuyakwenzeka nini, mhlawumbi kwikota yesibini yonyaka.
UXiaomi uqinisekisile ukuba isixhobo siza kusungulwa kwilizwe liphela. Baye bathi kungekudala iza kufika eYurophu, nangona okwangoku bengawunikanga umhla othile. Ke ngoko, kuya kufuneka silinde ulwazi oluthe kratya kwezi veki. Into esinayo ngoku lixabiso lokuqala lesi sixhobo.
Njengoko besesitshilo, sifumana iinguqulelo ezininzi zeXiaomi Mi MIX 3 5G. Ixabiso elincinci kwezi nguqulo ene-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Kule meko, Le nguqulo iya kuba nexabiso lama-euro angama-599, njengokuba inkampani sele iqinisekisile. Asazi ukuba ngawaphi amaxabiso eziza kubakho zonke iinguqulelo zesixhobo. Kodwa sinethemba lokuba la maxabiso kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi MIX 3 5G: Ifowuni yokuqala yeXiaomi ye-5G isemthethweni kwaye sayivavanya yona